Waa maxay Midsommar? | Somaliska
Waa maxay Midsommar?
Ciida midsommar waa mid si weyn looga maamuuso dalkaan Sweden oo ku beegan 22 bishaan Juun oo ku aadan sabtida. Soomaalida qaar ayaa ka qeyb qaata dabaaldaga maalintaan iyadoo iskuulada SFIga ay bilaabeen in ay dadku ku baraarujiyaan ka qeyb galna maalintaan. Hadaba warbixintaan waxaan ku eegeynaa taariikhda maalintaan iyo sababaha ka dambeeya.
Midsommar waa caado soo jireen ah oo laga maamuuso wadamo badan oo Yurub ah sida Sweden, Norway, Finland , Denmark iyo wadamo badan. Caadadaan ayaa dhinac waxay xiriir la leedahay diinta Kiristaanka oo lagu maamuuso xasuusta nabi Yaxye. Dhinaca kale caadooyin badan oo la sameeyo ciida midsommar ayaa waxay xiriir la leeyihiin dhaqamadii acraabiga ee ka horeeyay inta aysan diinta Kiristaanka soo gaarin Sweden.
Ka hor 1953 midsommar waxaa loo dabaal dagi jiray 24 bisha Juun balse waqtigaas ka dib waxaa loo wareejiyay jimcaha iyo sabtida u dhaxeeya 19-25 Juni. Galabta jimcaha ee ka horaysa sabtida ayaa waxaa loo yaqaan (Midsommarafton) halka maalinta sabtida ee ku beegan maalinta midsommar loo yaqaan (Midsommardagen). Ciida midsommar ayaa ah ciidaha ugu muhiimsan Sweden oo la dhihi karo waa ciida keliya ee dhaqankeeda Swedishka yahay marka la eego qaabka loo dabaal dago.
Dabaaldaga weyn waxa uu dhacaa galabta jimcaha iyadoo ay isku soo ururaan familka oo dhan halkaasoo ay soo ururiyaan ubaxyo iyagoo dhisa tabeelo ay ku wareegsadaan iyagoo ciyaaraya. Marka ay ku wareegsanayaan tabeelaha loo yaqaan (midsommarstång) ayay hadana waxay dhageystaan heesaha iyagoo madaxa ku xirta ubaxyo. Goobtaas ayaa lagu cunaa baradhada iyo qudaar kale isla markaana aad ayay dadku u cabaan khamriga.
Waqtigaan midsommar ayay Swedishku waxay aaminsanaayeen waayihii hore in uu wanaagsanyahay nasiibka iyo sixirka iyagoo dhalinyaradu qaasatan gabdhaha ay soo ururiyaan ubaxyo kuwaasoo ay hoos dhigaan barkinta ay ku seexanayaan, iyagoo rajeynaya in habeenkaas ay ku riyoon doonaan qofkii guursan lahaa. Waxay kaloo aaminsanyihiin in waqtigaan caafimaad la helo iyo dhaqaale.
Marka laga reebo caadooyinka ayaa maalinta Midsommar waxay ku beegantahay maalinta ugu iftiinka dheer ee aduunka, waqtigaasoo ay qoraxdu joogto dherarka ugu sareeya.
Sawirada aad ku aragtaan mowduuca ayaa ah Soomaali la barayo sida loo dabaaldago midsommarka magaalada Borlänge ee gobolka Dalarna.
Gabadhii ugu horeysay oo xijaaban oo booliska ka midnoqonaysa
abukar ahmed says:
ASC waxaan rabaa in aan halkaa kaga sheego walalkeen jimcaalo inuu kala ilali waxyabaha uu qorayo iyo waxa aay diinta islamku ka qabto waxaan leayhay waxaa wanagsan inuu fiiriiyo marka hore waxaan aqlaaq ahaan ma u wanagsanyihiin in aad qorto hadii aay jawabtu haa noqoto kadibna uu fiiriyo diiniyan ahaan maxeey ka qabtaa diinta islamka intaaso dhan ma uu sameyo walalka jimcaale waxaan ka codsanaya in waxayabaha cadad u noqday dadka anan heysan diinta islamka inuusan naga barin caruurta waxaan raba in aan iraahdo gunti iyo gabagabadi warkeyga jimcaaloow aqlaaq ahaan iyo diin ahaanba usu soo sax waad janjeertaaye kana ilali bulshada islamka dhaqanka galada ee aad u fududeyneyso mahadsanid
Aqliga abgaal says:
Adeer 2da sano wax ka sheeg ee naga daa sheeko ciyaalka hadii kale iska xer webka dhan . Kaama baryeeyno marwalba si fiican noogu shaqeey waryaa .. Ha noo Qorin anaga waxaanan rabin waryaa . Wada caaya ninkaan
Fikrad aan lala dhicin 2 13
deeqo blan says:
June 21, 2013 at 16:04
Ninkaan jimcaale la dhahayo diin malahan aan filaa anaga been in uu noosheeko ayee mareysaa arinta 2 sano runta ka sheek aan kulenahay plz madaxa dirbiyada haku dhufanin websiteka magac xumo ayaad ukeentay ayaantan wadanka dhan ayaantan in somaliska beenlow ayuu noqday in la dhaho ayee mareysaa asc
saanaa larabaa says:
June 21, 2013 at 17:55
Asc soomaliyay SIDEE wax u jiraan mesha waxa ku qoran iyo fikiradaha hoos ku qoran waa wax an isku meel galin caadi halayska dhigo subxanaalah
Mowducaan u so galiyay hadaan u imaado webka runtii waxan u arkaa mid uu qiimo uyeelaayo Christianka iyo dhaqamadooda
Asxaabta beejkan ku xirana intooda badan waxay daneeyan arimaha imgretionka wa inay dhankaas u badnaadaan mowduucyada beejkan
Asc, waxaan aad ula yaaba aqristayaasha qaarkood miyaanay wax fahmin, Hadda mawduuca laga sheekaynayaa waa taariikhda Sweden, waana fiican tahay dadka Somalida in taariikhda Sweden la baro sababtoo ah wadankaan weynu degganahay waana wadankeenii labaad marka waa inaynu taariikhda wadanka wax ka baranaa. Hadii aad tariikhda Sweden aad diidaysaan maxaad ka soo dooneyseen markii hore? mase is weydiiseen Moqdishu xaalada ka socoto oo ah haday noqon lahayd dad guryahoodii laga dhacay oo dad lagu sii dhalay ama dad la iska dilaayo. marka xaalada konfurta Somalia iyo tariikhda Sweden waxaa noo fiican inaan taariikhda Sverige wax ka barano anagoo aan dadna konfur ku dilin dadna guryahooda intan dhacno ciyaal aanan ku dhalin.
June 21, 2013 at 22:19
waan kugu raacsanahay sxb hadalada qaarkood. waxaa wax lala yaabo ah in markii uu jimcaale mawduuc soo qoro ah xaalada Sweden ka jirto in dadka qaarkood ay weydiin sxb 2 dii sano ka waran iyo been ayaad shhegaysaa, waa wax aad looga xishoodo. Fadlan dadku waa inay fahmaan maowduuca laga hadlaayo oo ay fikirkooda ka dhiibtaan. Anigu waxaan leeyahay Jimcaalow waad mahadsan tahay sxb sidaas xaalada Sweden ka jirto aad mar walbo usoo qorayso, Dadka aan qoraalkood ka fiirsan waa inay isku xishoodaan oo ay cayda iska dhaafaan.
Zacki Abdi says:
kkkkkkkkkkkk Somalidan jaahiliin weeye dhamaantood website kan wuxuu ka faaloodaa waxyaabaha ka dhaca Sweden dhaqamadooda iyo caadooyinkooda soo jireenka ah sidoo kale wararka cusub ee maha WEBSITE UU LEEYAHAY MIGRATIONVARKET dadkan laba sano ku waashay waxaan odhan lahaa su’aashaas MIGRATIONVERKET websitekooda ka eega…
June 22, 2013 at 21:41
jimcale hadaan ahan laha aniga hal asxana idin ma sameyen somaliyey,jaahilnimo waxad kagarten maanta ninka kaliya idin ordaye oo wiliba free idinkugu shaqenaye waqtigisa qaliga na idin huraye inaad saas u aflagadesan,dhib malah owalba wa laidinku oga jazarnimada,
Asc walalyaal kusoo dhowad barmamij loosamaynayo dadk 2sano waxa larabaa iney iskuxirman dadka ayhaysato shuruda 2sano deeqo walal nagusoo biir waxan rabnaa innan xaqena sodhacsano insha Allah oo gacmaha isqabsano insha Allah gacmowadalirbaywaxkuqabtan kontakt 0767413038 Ruun iyo deeqo iyo dadka daneya 2sano waadmahadsantihiin dhamantiin xiriix fican
June 23, 2013 at 10:57
asc ma wanagsana dadka magacyadooda ina la so qato hanad kan wata wax jeclaan lahaa magacaga ina iska so qadato why qof kaleh magac lagu yaqaano uso qadanaysa
amina waa siwanagsan waa ina iska war haynaa dadkeena hesto arinta 2sano marba wixi sokordha waa ina isla soo socodsina isha allaah dadkan websetka waxyabaha ana haboneen kawada wax jeclaan laha mesha ina kadayaan meshan afkaar uun baa la isku wedarsadaa asc
ASC WALAALAHA SOOMALIYEED EE DHIBAATAYSAN EE ARINKA 2SANO HAYSTAAN WAXAN U SHEEGAYA IN DADAAL BADAN UU JIRO SI XAQEENA AAN U HELNO OO CODKEENA AAN U MIDAYNO WAXAN RABNAA INAAN XIDHIIDH FIICAN LA YEELANO HAAYADAHA WADANKA IYO LOOYARADA MARKAA LA XIDHIIDHA LANBARKAN 0767413038 RUUN
Waxaan filayaa abuukar ma adan fahmin mowduuca iyo waxa iyo qaabka uu tafatiraha u dhig dhigay fadlan ku noqo markale inta kale ee aqrinaysana qoralka abuukar markale aqri adigoon abuukar ku fakir noqon aniga taas ayan lee yahay tafatiraha na waxan qabaa sidii loo baahnaa ayuu inoogu kala cadeeyay sawirkana waxa uu u soo qaatay sida hadaan somali nahay la inoogu qaldo diimanka aan aqoonta u laheeyn marka qoraha meeshii loogu duceyn laha ayan leenahay balka fiirso hadaba suasha abuukar an kugu so celn rabo jawabta ii sheeg ma waxaad rabtay in uu inaha dhaho midsommer firande hala ga qayb qaato ?
Ninka leh caruurta waxxun yaan layga barin waxaan weydiin lahaa caruurtaadu iskuuladadalka ma dhigtaan miyaa? Kuwa iyagana leh labada sanno nooga sheekee ma waxaa ka maqan ciyaal ay rabaanwaddanka n ay marna leeyihiin dhaqa nkiisa kirishtaan yaan caruurta layga barin in loo keeno.? Hadaadba sidaas ugu baraarugsan tihiin waddankan inuu kirishtaan yahay oo uusan faaido idiin lahayn walaalayalmaxaa loogu soo qulqulayaa oo welibana oohin beenbeen ah laysaga keenayaa oo loo leeyahay ciyaal baa iga maqanee ha laii keeno. Baqtiga ma cuni fuudkiisana waa cabaa waxsoconayama ahan ee caqli kale keena. Mid walba magaalo uusan ku dhalan ,qabiil uusan ahayn iyo magac iyo sheeko been ah ayuu waddankan la soo galay kadib marakii sharciga uuqaatayna weji cusub iyo aflagaaddo ka duwan amaantii uu u hayay dalkan uu la soo baxaa miskiinamadii sharciga ka hor lagunoolaa miciyo doofaar baa beddela, laakiin beentii waxbalagama beddelinoomarkiihore been baa sharcilagu qaatay haatana been kale ayaa dhaqaalihii dalku lahaa lagu guranayaa markaas baala leeyayahay caruurtawax xun ha iga barin iwm